I-North East India Hill Station Tour. Shayela + 91-993.702.7574 yokubhuka
I-North East India Hill Station Tour
Ukuba ungumthandi wemvelo kwaye ufuna ukufumana umhlaba weenduli ezingenakunqumlayo kunye namathafa aneenqwelo eziluhlaza, u-North East India Hill Station Tour kuwe. Ukubambisana kwee-7 nazo zibizwa ngokuba yiLizwe labaSebenzi abaSebenzi, North East India yiphatha eliqhelekileyo kuzo zonke iintlobo zabahambi. I-Sand Pebbles 'yokubonelela ngeNew Station East yeNdwendwe yeNdwendwe yeNdwendwe yaseNdiya kwixabiso elithe Ukujikeleza amahlathi amancinci, ama-monasteri yamandulo, iintaba ezikhethiweyo zekhephu, iziqithi ezinqabileyo, amachibi aqhaqhaqhaqhayo, kunye namanzi e-floodcading, yonke indawo yaseNyakatho-mpuma.
Indiya ivakalelwa ngathi uhlala kwiWonderland. I-North East ye-India Hill Station Tour ingaba yindalo yendwendwe. Inomtsalane wayo oza kukutshabalalisa kwiinyawo zakho! Isitulo saseNorth East India Hill Tour igcwele iinduli eziqingqiweyo, izityalo eziluhlaza ezikhusele amawaka ezinqabileyo kunye nezilwanyana. Ngokuqinisekileyo kufuneka ucwangcise ityelelo kwiipetroli zaseNyakatho-mpuma zelo xesha elihle.
Wonke ummandla waseNyakatho-mpuma ye-India unobungakanani obunjalo kunye nezimangalisa ezimangalisayo ezishiya bonke abahamba ngeendlela ezithandekayo. Ukuqinisekisa ukuba unamava afanelekileyo eNyakatho-mpuma ye-India, qiniseka ukuba unomlingane ohambahamba naye Iintlanzi zeNtsantyambo, ohlala ezama ukunikela okulungileyo kuyo yonke into. Sinikela ngeyona ndlela ihamba phambili kwi-Packages zoKhenketho eNtshona East.
Ikhefu lethu leSitishi seHluma yeeholide zeHlabathi zihamba ngokufanelekileyo kuzo zonke izizathu eziwela ingqondo yakho ukuba ungumhambi onomdla okanye nje umntu ofuna ukuhlala, ukhulule kwaye ujabulele umhlaba wemilingo. Ukuhamba ngokubambisana kubangela abantu ukuba bajonge njengoko bahlola izinto kunye. Yiza ukwenza iholide lakho iholide ibe yinyani ngeNdwendwe yeNtshontsho yamanqabana eNtshonalanga ye-East Hill.
I-North East kuphela
Ikhowudi yoKhenketho: 027
Ikhowudi yoKhenketho: 022
Iprogram ye-03 Nights
Ikhowudi yoKhenketho: 121
Iprogram ye-07 Nights
Ikhowudi yoKhenketho: 120
Ikhowudi yoKhenketho: 122
I-Eastern India IiSitishi zokuThoma